यशको ‘के.जी.एफ’ रिलिजमा आउँदा शाहरुखको ’जीरो’लाई घाटा लाग्यो ! « News24 : Premium News Channel
यशको ‘के.जी.एफ’ रिलिजमा आउँदा शाहरुखको ’जीरो’लाई घाटा लाग्यो !
एजेन्सी । किङ खान शाहरुखको फिल्म ‘जीरो’ले बक्स अफिसमा खासै कब्जा जमाउन सकिरहेको छैन । यो फिल्मले पंडितहरुको अनुमान भन्दा पनि कम कमाई गरिरहेको छ । तर यो फिल्मले आज क्रिष्टमसको छुट्टिकमो फाइदा उठाउन सक्छ । यो फिल्मले रिलिजको चार दिनमा ६० करोडको आँकडा पार गरेको छ ।
अर्को तर्फ साउथ फिल्म ‘के.जी.एफ.’ले बक्स अफिस हिन्दी वर्जनमा लगातार कमाइको रेकर्ड तोडिरहेको छ । यो फिल्मले रिलिजको चौथो दिन पनि राम्रो कमाई गरिहरेको छ ।
गत शुक्रबारबाट दर्शकमाझ रिलिजमा आएको शाहरुखको ‘जीरो’ फिल्मले पहिलो दिन २०.१४ करोडको कलेक्शन गरेको थियो । त्यस्तै दोस्रो दिन १८.२२ करोड, तेस्रो दिन २०.१७ करोडको कलेक्शन गरेको थियो । त्यस्तै यो फिल्मले सोमबार १० करोडको मात्र ब्यापार गरेको थियो । अहिलेसम्म यो फिल्मले ६९ करोडको ब्यापार गरेको छ ।
अर्को तर्फ साउथ फिल्म ‘के.जी.एफ.’ले हिन्दी वर्जनमा मात्र चार दिनमा लगभग १२ करोडको कमाई गरेको छ । साथै यो फिल्मले अझैं पनि हिन्दी वर्जनमै राम्रो कमाई गरिरहेको छ । तेलेगु भाषी यो फिल्मको स्क्रीन्सहरु बढाइरहेको छ । यो साउथ इण्डीयन फिल्म ‘के.जी.एफ’ कन्नडमा बनेको हो । यो एक एक्शन थ्रिलर फिल्म हो । फिल्ममा कलाकार यशको साथमा श्रीनिधि पनि मुख्य भुमिकामा छन् ।
यो फिल्मले आन्ध्रा प्रदेश, तेलंगना र तामिलनाडुमा राम्रो कमाई गरिरहेको छ । यो फिल्मले अमेरिकामा पनि चार सदनमा ५ करोडको कमाई गरेको छ । यो फिल्मलाई हिन्दी वर्जनमा मात्र १५०० वटा स्क्रीन्समा रिलिज गरिएको छ । ‘के.जी.एफ’ रिलिजमा आउँदा शाहरुख खानको ‘जीरो’लाई धेरै नोक्शान पुगेको छ ।
बिन्ती कुमार र शान्ताको ‘होई मेरो संसार’को चर्चा (भिडियो)
काठमाडौं । गायक बिन्ती कुमार गुरुङ र गायिका शान्ता अर्यालको स्वरमा सजिएको नयाँ गीत ‘होई
भुवन केसी र सृष्टि फिचर्ड रानीको ‘घरमा आइसियोस् न’ सार्वजनिक (भिडियो)
काठमाडौं । नेपाली चलचित्रका सदाबहार नायक भुवन केसी अभिनित नयाँ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ
अभिनेत्री करिश्माले २.४१ जीपीए ल्याएर पास गरिन् ‘प्लस टु’
काठमाडौं । बुधबारदेखि काठमाडौंमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को एकता महाधिबेशन सुरु भएको छ । उक्त